8 इन्च व्यापक बाथरूम नल
भित्ता-माउन्ट सिink्क नलहरू
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW 8 In। क्रोममा फराकिलो २-ह्यान्डल बाथरूमको नल
WOWOW 8 In। क्रोममा फराकिलो २-ह्यान्डल बाथरूमको नल
रेटेड 5.005बाहिर आधारित 22 मूल्यांकन ग्राहक
(22 ग्राहक समीक्षा)
तपाईंको आफ्नै प्रयोगको लागि उपयुक्त २ the२०2320300०० सी बाथरूम सि s्कको नल छान्नुहोस्, र सबैभन्दा सहज प्रयोग गर्नुहोस्; तपाईले छनौट गर्नुहुने सबै भन्दा राम्रो हुन्छ। हामी, सधैं को रूप मा, ग्राहकहरु को लागी राम्रो गुण र राम्रो सेवा को रखरखाव गर्नेछौं, र म तपाईं संग अधिक साझा गर्न को लागी अगाडि हेर्छु! सामग्री छनौटबाट मोडलि processing्ग सम्म प्रोसेसिंग सम्म हामीले कडा मेहनत गरेका छौं तपाईंलाई राम्रो गुणवत्ता प्रदान गर्नका लागि।
2320300C स्थापना निर्देशन
बाथरूम नल क्रोम २ ले २ 2२०2320300०० सी संभाल्छ
एक व्यापक बाथरूम नल निश्चित रूप बाट कुनै बाथरूम लाई भव्यता को एक स्पर्श दिन्छ। एक व्यापक बाथरूम नल2ह्यान्डल को एक अर्को ठूलो लाभ यो हो कि तपाईं आफ्नो वास्तविक इच्छा अनुसार पानी प्रवाह मिश्रण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। २-ह्यान्डल बाथरूमको नलले तपाईंलाई गरम र चिसो पानी व्यक्तिगत रूपमा यसको प्रवाह दर सहित नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। नतिजा स्वरूप, तपाईं कहिले पनि गल्ती फेरि गर्नुहुन्न र तातो पानी खेर फाल्नुहुनेछ जबकि तपाईंलाई वास्तवमा यसको आवश्यकता पर्दैन। वा नराम्रो, तातो पानीले आफ्ना हातहरू जलाउन। त्यसकारण हाम्रो बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डल तपाईंको बाथरूमको लागि एक रमणीय र सुरक्षित समाधान हो।
विशेष 7-डिजाइनको साथ उच्च चाप बाथरूम नल, निश्चित रूपले कुनै पनि बाथरूमलाई विशेष स्पर्श दिन्छ। WOWOW का डिज़ाइनरहरू व्यापक रूपमा बोल्ड डिजाइनहरूको खोजी गर्न यसको बाथरूम faucets संग फरक बनाउन व्यापक रूपमा परिचित छन्। नतिजा, WOWOW को बाथरूम faucets सँधै अन्य बाथरूम faucets तपाईंले पाउनुहुनेछ भन्दा केही फरक छ। यसले तपाईंलाई तपाईंको बाथरूमलाई विशेष र अद्वितीय सजावट दिन मद्दत गर्दछ। यो अनौंठो पक्ष तपाईले बाथरूमको नल क्रोम २ व्वाडब्लूओ हन्डलमा पनि पाउनुहुनेछ। यो बाथरूम नल निश्चित रूप मा तपाइँको बाथरूम एक नाटकीय अपग्रेड दिनुहुन्छ।
बाथरूमको नल क्रोम २ ह्यान्डल स्थापना गर्दै
बाथरूमको नल क्रोम २ ह्यान्डलहरू स्थापना गर्न तपाईंलाई--होलको बाथरूम सिंक आवश्यक पर्दछ। सामान्यतया, दुई ह्यान्डलहरूका लागि पूर्वनिर्धारित प्वालहरू नलबाट नै itself इन्चमा राखिन्छन्। तर तपाईं आफैंमा दूरी छनौट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग पूर्वनिर्धारित बाथरूम सिंक छैन भने। ह्यान्डलहरूलाई नलबाट मात्र tot कुल १ inc इन्चेडमा राख्न सकिन्छ। त्यसैले सहि दूरी तय गर्न यो तपाईं माथि निर्भर हुन्छ। ह्यान्डलहरू स्थापना गर्न तपाईलाई १ देखि १2 ईन्चको दुई अतिरिक्त प्वालहरू चाहिन्छ। डेक प्लेट मोटाई १.२ ईन्च हुन सक्छ।
WOWOW को बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डल एक अद्वितीय जडान निर्माणको साथ डिजाइन गरिएको थियो। तातो र चिसो पानी एक रिन्च को उपयोग नगरी छिटो स्थापना जडान द्वारा स्थापित गर्न सकिन्छ। यस अभिनव प्रविधिको कारणले, तपाईं फोटेको लागि पानी पाइपहरू रोक्नुहुनेछ। यो बाथरूम नल पूर्ण किस्त प्याकेजको साथ आउँदछ, जडित कनेक्शन पाइपहरूको सेट र थप पानी आपूर्ति लाइनहरू सहित। यस स्थापना किटको साथ तपाईं यस बाथरूम नल क्रोम २ स्थापना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ प्लम्बरलाई काममा लिई बिना आफैलाई ह्यान्डल गर्दछ। तपाइँ WOWOW को सहज स्थापना भिडियो अनुसरण गरेर लागत स्थापनामा उल्लेखनीय बचत गर्न सक्नुहुनेछ। स्थापना कुनै ha० मिनेटमा कुनै समस्या बिना नै गर्न सकिन्छ। के त्यो सजिलो छैन?
बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डलहरू डिजाइन गर्नुहोस्
बाथरूमको नल क्रोम २ ह्यान्डलहरूमा सुचारु सतहको साथ एक सुव्यवस्थित डिजाइन फिचर गर्दछ जुन बाथरूमको कुनै पनि शैलीमा अचम्मको देखिन्छ। धातु डबल-ह्यान्डल लीभरहरूले तपाईंलाई सजिलो नियन्त्रण प्रस्ताव गर्दछ। लिभरहरू यसको सीधा रेखा र एर्गोनोमिक्स डिजाइनको साथ अद्भुत देखिन्छन्। लिभरहरू उचित आकारका हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सुविधाजनक र फर्काउन सहजै बनाउँदछ। तपाईं लिभरहरू थोरै मेहनतका साथ अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ र केवल चरण बगैचामा पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईको बाथरूमको नल पनि पूर्ण2degrees० डिग्रीमा परिणत गर्न सकिन्छ, तपाईलाई बाथरूमको नल प्रयोग गर्दा वा तपाईको बाथरूम सिinkक सफा गर्दा तपाईलाई अधिकतम सान्त्वना प्रदान गर्न।
२ ह्याण्डलको साथ चाँदीको बाथरूम नलले ऐना जस्तो क्रोम फिनिश प्रदान गर्दछ। यो तथाकथित भ्यानिटी शैली एकदम उत्तम छ र त्यसैले कुनै पनि आधुनिक बाथरूम सजावटको लागि विशेष गरी उपयुक्त छ। यस बाथरूमको नल क्रोम २ ह्यान्डललाई एक सुन्दर स्पर्श दिनको लागि यस क्रोम बाथरूम नललाई हल्का रूपमा पोलिश गरिएको थियो। सामान्य उपस्थितिमा क्रोमको चमकदार अंश केही हदसम्म कम गरिएको थियो विशेष प्रकारको उपस्थिति प्रदान गर्नका लागि। तपाईंले देख्न सक्नुहुने रूपमा, WOWOW ले तपाईंको बाथरूम सजावट विशेष र अद्वितीय बनाउनका लागि विभिन्न तरिकाहरू खोज्दछ।
शीर्ष-मार्केट गुणस्तरको बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डलहरू
बाथरूमको नल क्रोमका सामग्रीहरू2WOWOW को हैंडलहरू निश्चित रूपमा मार्केटको शीर्ष हुन्। केवल ठोस धातु सामग्रीहरू स्टेनलेस स्टील, पीतल र जिंक जिंकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो उच्च गुणवत्ता र लामो जीवन धीरज सुनिश्चित गर्दछ। यी ठोस धातु सामग्रीहरू निश्चित रूपमा सामान्य उद्योग मापदण्डहरूभन्दा माथि छन्। WOWOW ले केहि A- ब्रान्डहरू भन्दा राम्रो गुणस्तरीय सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ जुन बजारमा परिचित छ। यी टिकाऊ धातु सामग्रीहरूको साथ, WOWOW ले ग्यारेन्टी गर्दछ बाथरूमको नल क्रोम २ ह्यान्डलहरू भाँचिनेछैन। विशेष गरी पीतल जडानकर्ता, पीतल कोर र ब्रास नटहरूले एक सामन्ती एकता बनाउँदछ जुन ठोस र जंग मुक्त हुन्छ। साथै, यी सामग्रीहरू सुनिश्चित गर्छन्
पानीको गुणस्तरको रक्षा गर्नुहोस् र त्यसकारण तपाईं र तपाईंको परिवारको स्वास्थ्य।
WOWOW को बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डलहरू मानार्थ पप अप ड्रेन स्टापरको साथ आउँदछ। यस तरीकाले तपाईले तपाईको बाथरूम सिंक सम्पूर्ण एकताको रूपमा डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। पप अप ड्रेन स्टापर तपाईको औंलाको हल्का स्पर्शले सजिलैसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस तरिकाले तपाईं सजिलैसँग सबै पानी बग्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि गडबडी आवाज बिना यसको यसको डिजाइनको कारण।
जोखिम रहित बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डलहरू
उच्च-ग्रेड नियोपरल एरेटरले तपाईंलाई भद्र र सहज पानी प्रवाह प्रदान गर्दछ। यसको अभिनव पानी प्रवाह नियन्त्रणको कारण, तपाईं पानी स्नानबाट स्वतन्त्र हुनुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो बाथरूमको नल प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तो कि यो नवीन रूपले डिजाइन गरिएको हो, यसले तपाईंलाई consumption०% भन्दा बढी पानी उपभोग गर्दछ। त्यसकारण तपाईं आफ्नो पानीको लागत साथै WOWOW को बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डलहरू कम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। नियोपर्ल एरेटर डिटेकेबल छ र केवल सफा वा आफैँले बदल्न सक्नुहुन्छ।
WOWOW ले तपाईंलाई यसको बाथरूम नल क्रोम २ ह्यान्डलको साथ पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछ, हामी तपाईंलाई2बर्षे वारंटी अवधि प्रस्ताव गर्न विश्वास गर्दछौं। हामीले धेरै फिर्ता ग्राहकहरू हाम्रो बाथरूम faucets फेरि किनेको देख्यौं, र यो विशेष बाथरूम नल धेरै सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि लागू गरिएको छ। तसर्थ सबै भन्दा राम्रो गुणको लागि हाम्रो उद्देश्य हाम्रो विश्वव्यापी ग्राहकहरु द्वारा पुष्टि हुन्छ। तपाईं हाम्रो bathroom ० दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीले कभर गर्नुहुन्छ जब तपाईं हाम्रो बाथरूमको नल खरीद गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं बाथरूमको नल क्रोम २ ह्यान्डल द्वारा विश्वस्त हुनुहुन्न भने, तपाईंले सोधे बिना प्रश्नहरूको पूर्ण फिर्ती पाउनुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं हाम्रो बाथरूम नल क्रोम २ खरिद गर्न सक्नुहुनेछ १००% जोखिम-मुक्त!
संक्षिप्तमा बाथरूम नल क्रोम २ को ह्यान्डलका फाइदाहरू:
Any कुनै पनि बाथरूममा एक वाह-कारक दिन्छ
Bathroom साहसपूर्वक डिजाइन गरिएको बाथरूम नल
 अद्वितीय क्रोम पॉलिश स्पर्श
Operate अपरेट गर्न सजिलो
Massive विशाल ब्रास सामग्रीबाट बनेको
 year-वर्ष ग्यारेन्टी
SKU: 2320300 XNUMX१C विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: अमेरिकी मानक, व्यापक रूपमा ह्यान्डल गर्नुहोस्, लीभर ह्यान्डलहरू
11.14 x 10.2 x 3.27 इन्च
एल *** एन2020-05-05
म यसको गुणवत्ता को लागी एक नल यति सस्तो सान्दर्भिक थिएन। यो म स्टोर मा खोजेको एक जस्तै हो तर महँगो छैन। स्थापित गर्न धेरै सजिलो, धेरै स्वच्छ र सुरुचिपूर्ण डिजाइन। मलाई साँच्चिकै मन पर्छ यो कसरी राम्रोसँग बाथरूम र सिंकको कुनै डिजाइनको साथ गयो। धेरै उच्च गुणवत्ता। कडा र लचिलो र धेरै टिकाऊ लाग्छ। दागहरू वास्तवमा नलको सतहमा कुर्दैन तर यो गरे पनि यो एक सजिलो सफा हो। पछिल्लो तर अब कम्तिमा, नल टाउकोले 360 XNUMX० डिग्री घुमाउँछ, जुन धेरै सुविधाजनक हुन्छ जब म मेरो अनुहार धुँदै वा ब्रश गर्दै थिएँ। वास्तवमै सजिलो जस्तो बनाइयो।
एच *** s2020-05-09
यो नल वास्तवमै राम्रो छ, यो धेरै सुन्दर देखिन्छ - प्याकेजि very एकदम सावधान छ, प्रत्येक भागको आफ्नै स्वतन्त्र गैर बुनेको ब्याग छ- पानीको बहाव ठूलो छ, र ह्यान्डल धेरै संवेदनशील छ, म यस खरीदसँग धेरै सन्तुष्ट छु। नल महँगो छैन, तर ह्यान्डिम्यान यति महँगो छ। मैले एक हेन्डिम्यानलाई भाडामा लिएँ र मेरो नयाँ नल स्थापना गर्न यसलाई २. hours घण्टा लाग्यो। किनकि पुरानो नल खिया लागेको छ, यसलाई हटाउन गाह्रो छ ， तर यसको लायक छ
यो एक भारित नल। सुपर स्थापित गर्न को लागी सजिलो छ र तपाई यो भन्न सक्नुहुनेछ राम्रो गुण हो। आशा छ यो धेरै लामो समय सम्म रहन्छ
मास्टर स्थापना गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्! गुणस्तरीय सामग्री। आकार र र my मेरो बाथरूमको लागि धेरै उपयुक्त छ!
एम *** एल2020-05-19
सभ्य मूल्यको उच्च गुणस्तरको नल मलाई मन पर्छ र c्गको कोडेड ह्यान्डलहरू सबै उच्च-गुणको बनाइएको देखिन्छ पप-अप नाली थोरै सस्तो देखिन्छ तर कसैले यसलाई देख्न सक्दैनन् स्थापित भए पछि यसलाई राम्रो देखिन्थ्यो। डिजाईन मन पराउनुहोस् भारी कोठा भएको विशाल नल टाउको मनपर्दछ तपाईंको कोठा भित्र हात प्राप्त गर्न र तपाईंको अनुहार ECT धोउन सक्षम हुनुहोस्। उपकरणको बाहेक तपाईलाई आवाश्यक पर्ने सबै चीजसहित आउँदछ। Love 360० डिग्री पालो मन पराउनुहोस्। मैले डिजाइन गरे किनकी यो मेरो प्यारो शैलीमा एकदम राम्रो देखिन्छ। खुशी छ यो मान्छे मा राम्रो देखिन्छ यो तस्वीर मा गर्छ र यो किफायती सबै भन्दा राम्रो अंश हो।
एम *** ई2020-05-23
यो 40० बर्ष भन्दा पहिले स्थापना भएको नल बदल्नको लागि थियो जुन चुहावट सुरु भयो। समयको साथ प्रगतिहरू अद्भुत छन्। ओ-रिंग्सको सट्टा प्लटमेन्ट पुट्टी प्रयोग गर्नु भनेको माउन्टिंग उल्लेख नगर्न। यो faucets पहिले भन्दा धेरै सजिलो थियो। राम्रो देखिन्छ र काम गर्दछ। अत्यधिक सिफारिश।
हामीले वास्तवमै यो फिक्स्चर हाम्रो नयाँ स्ट्यान्ड एक्लो बाथटबको लागि किन्यौं किनभने हामी एक लामो स्थिरता चाहान्छौं। हामीले एउटा छुट्टै ड्रेन प्लग किन्नुपर्‍यो जुन हामीलाई थाहा थियो हामी गर्छौं किनकि यो बाथरूम सिंकको लागि बढी बनाइएको हो। स्थिरता जबकि बाथटब मा धेरै राम्रो देखिन्छ। यससँग धेरै खुसी छ!
राम्रो देखिने नल। हामीले भर्खरै यो स्थापना गर्यौं र यसको अहिलेसम्म कुनै समस्या भएको छैन। हाम्रो अन्य बाथरूम हार्डवेयरसँग मेल खान्छ। नली बाथरूम रमाईलो लुक, पाँच तारा दिन प्रसार।
एच *** एन2020-06-09
यो हरेक एक पैसा को लायक छ !!! मेरो सिink्क एकदम राम्रो देखिन्छ र स्थापना गर्न यो सजिलो छ। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु। यो वास्तवमै काल्पनिक नल जस्तो देखिन्छ।
जब विशेष रूपमा चयन गरिएको ब्रश प्रकार खरीद गर्दा फिंगरप्रिन्ट छोड्ने मनपर्दैन। जब मैले सामान पाएँ, मैले यो सही छनौट गरेको पाए। यो मेरो हातमा समात्न उच्च ग्रेड र भारी जस्तो देखिन्थ्यो।
उत्कृष्ट नल। उच्च गुणस्तर। कडा। सुन्दर समाप्ति। राम्रो प्याक गरिएको छ। म एक सानो उपयोगिता सिंक को लागी प्रयोग गर्थे। प्रेम छ कि यो swivels।
यो बाथरूमको लागि एक ठूलो नलमध्ये एक हो, केही दिन अघि मेरो बाथरूमको नल पूर्ण रूपमा ब्रेक भएको थियो, त्यसैले केही नयाँ दिनहरूमा यो नयाँ नल राख्नुहोस्, र यसले राम्रो काम गर्दछ जुन मेरो बाथरूमलाई अझ र color्ग देखिन्छ, मलाई यो मनपर्‍यो, र मेरो परिवार सबै यो मन पर्छ!
त्यसैले म वास्तवमा नल प्रयोग गर्न सक्दिन किनकि यो मेरो हालको हार्डवेयरसँग मेल खाँदैन। मैले सोचे कि यो एकदम आकर्षक र राम्रो गुण हो। प्लम्बरले भने कि ऊसँग कुनै समस्या स्थापना हुन छैन त्यसैले मँ सजिलो स्थापना छ। निराश यो मेल खाँदैन यो वास्तवमा राम्रो हेर्दै भएको थियो!
म विश्वास गर्न सक्दिन कि मैले यो सबै आफैं सेटअप गरेको छु र 30० मिनेट मात्र लाग्छ। नल स्थापना गर्न यो मेरो पहिलो पटक हो जसको मतलब स्थापना गर्न वास्तवमै सजिलो छ। यो मेरो बाथरूममा राम्रो र स्टाइलिश देखिन्छ।
यो नल स्थापना गर्न सजिलो छ। म र मेरो श्रीमान् सँग स्थापनाको नलको साथ कुनै अनुभव छैन, तर हामीले निर्देशनहरू पालना गरेर आफैँले यो काम गर्यौं। यो मेरो मार्बल काउन्टरटपको शीर्षमा सुन्दर देखिन्छ। धेरै राम्रो गुण !!! मैले पहिले पाएको भन्दा राम्रो।
म मेरो मुख्य बाथरूममा देखाउनको लागि अनौंठो खोजीको लागि खोज्दै छु। मूल्यको लागि उत्कृष्ट गुण र टिकाउपन। निश्चित रूपमा सिफारिश गर्दछ यदि तपाईं बजेटमा हुनुहुन्छ र राम्रो शो टुक्रा खोज्दै हुनुहुन्छ भने।
यो नल महान देखिन्छ! यससँग सफा रेखाहरू छन्। प्लम्बर स्थापना गर्दा कुनै समस्या थिएन।
उत्पादन आफैले बोल्छ। पुरानो नालीको कारण स्थापना सामान्य भन्दा अलि कठिन थियो। यसलाई निकाल्न धेरै समय लाग्यो तर त्यसपछि योजना अनुसार सबै भयो। चित्रहरु जाँच गर्नुहोस्, मैले भनेजस्तै, यो उत्पादन आफैं बोल्छ
टी *** ई2020-07-01
जब मेरो केटाले यी सबै अंशहरू पहिलो चोटि हेरे, ऊ पागल भयो र भने "pex" जस्तो कि यो एक फोहोर शब्द हो। जब उनले यो नल स्थापना गर्न समाप्त गरे, उहाँ जसले यो डिजाइन गर्नुभएको को सराहनाहरू गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, र किन सबै पाइप फिक्स्चरहरू यो महान् होइन भनेर सोधेर। मलाई खुशी छ कि म यो नल छान्नुभयो। सजिलो बाहेक, मलाई लाग्छ यो सुन्दर छ।
मैले खोजिरहेको शैली मात्र र नल राम्रो देखिन्छ र राम्रोसँग संचालित हुन्छ। आधारभूत आपूर्ति र दिशाहरूसँग सावधानीपूर्वक प्याक गरियो। एउटा प्लम्बर स्थापना गर्नुपर्‍यो किनभने पुरानो नलका केही अंशहरू बज्र्दैनन् र अन्तत: शट-अफ भल्भहरू प्रतिस्थापनको आवश्यक पर्दछ, त्यसैले म पनि खुशी छु कि यो पनि ठूलो मूल्य थियो।
पैसाको लागि अद्भुत ट्याप। //3 कम्प्रेसन फिटिंगको साथ आउँदछ, यसलाई सजिलैसँग सि most्क इन्स्टल गर्न योग्य बनाउने।
एक ट्यापको गुणहरू डबल मूल्य छ।
हामीसँग नयाँ बाथरूम भ्यानिटी स्थापित छ जुन नलको साथ आएको थिएन, मैले धेरैलाई खोजें र यस कालोमा यसलाई प्रयोग गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रयोग भयो, यो धक्का / पुल गर्न सजिलो छ। स्थापना धेरै थियो। कागज पछ्याउन सजिलो बक्सको साथ आउँदछ, ठोस, चम्किलो, राम्रो देखिन्छ। अर्कोतर्फ, यो नल स्थापना गर्न सजिलो छ र हाम्रो नयाँ ग्रेनाइट काउन्टर शीर्षमा मा एकदम शोचनीय देखिन्छ।
म्याट कालो Tall बेसिन मिक्सर ट्याप
WOWOW 8 इंच व्यापक बाथरूम नल ब्रश ...
वाह ड्राईव असेंबलीका साथ क्रोम बाथरूमको नल
WOWOW एकल ह्यान्डल बाथरूम नल मैट कालो